Mutemo waVaObama Unotsigirwa neDare rePamusorosoro muAmerica
Chikumi 28, 2012
Dare repamusoro soro remu America ratura neChina mutongo unotsigira danho rakatorwa nemutungamiri wenyika iyi, VaBarack Obama, rekuvandudza mashandiro pamwe nemuitiro wemakambani anoita basa rekubhadharira vanhu vanorwara mari dzekurapwa, kana kuti health insurances companies.
Dare iri rabuda nemutongo uyu mushure mekunge vatongi vashanu vatsigira hurongwa hwaVa Obama, uho hunozivikanwa nerekuti Obama Care, ukuwo vatongi vana vakapikisa.
Mutemo wakaunzwa nemuzinda weWhite House unosungira munhu wese ari mu America kuva nhengo yekambani inobatsira munyaya dzekurwara, akatadza kuita izvi, obhadhariswa mari yemuripo. Mutemo uyu unosungirawo kuti makambani anoita basa rekubhadharira vanorwara, haafanirwe kuramba kutambira munhu anoda kuva nhengo anenge aine chirwere nechekare, sezviri kuitika pari zvino.
Vachipa mutongo wavo, mukuru wevatongi vematare edzimhosva, Va John Roberts, vati bumbiro remitemo yenyika rinobvumidza kuti vanhu vabatirwe mitero, nokudaro, matare haafanire kurambidza izvi kuitwa.
Hurumende yaVaObama yanga ichiti chirongwa chavo chekuti munhu wese ave ne health insurance chinochengetedzwa nebumbiro remitemo, sezvo munhu wese muhupenyu hwake, achizoda kurapwa kana arwara rimwe zuva. VaObama vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nemaviri vanoda health insurance mu America.
Matunhu makumi maviri nematanhatu emu America, anga achipikisa Obama Care. Mutemo mutsva uyu unosungira vana vose vane zvirwere kuti vatambirwe nema nemakambani anorongera vanhu kuzobatsirwa munyaya dzehutano, uye vakuru vane zvirwere nechekare, vachatanga kutambirwa nemakambani aya kutanga muna 2014. VaObama vanoti vatambira nemufaro mutongo uyu.
Vari kumirira bato re Republic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna Mbudzi gore rino, Va Mitt Romney, vati havasi kufara nemutongo waturwa. VaRomney vanoti vachashanda zvakasimba kubvisa mutemo uyu musi wavanotanga kushanda semutungamiri weAmerica kana vachinge vakunda musarudzo.
Chiremba wemazino anoshanda ari mu America ari chizvarwa cheZimbabwe, Dr Simba Parirenyatwa, vanoti pane zvakawanda zvinogona kuvhiringa mashandiro akanaka emutemo.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kumakambani anoita zve health insurance muZimbabwe, kanawo kuhurumende.
Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr Douglas Gwatidzo, vanoti zvaitika muAmerica zvinodzidzisa nyika dzemuAfrica kukosha kwakaita hutano hweveruzhinji.
Hurukuro naDr Simba Parirenyatwa
Mashoko aVa Barack Obama